एमालेको महाधिवेशनमा प्रचण्ड जान्छन् !
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूलाई एमालेको महाधिवेशनमा वक्ताको रुपमा निम्तो आएको बारेको बोलेका छन् ।
मङ्लबार, मंसिर ७, २०७८ ८:२५
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूलाई एमालेको महाधिवेशनमा वक्ताको रुपमा निम्तो आएको बारेको बोलेका छन् । उनले तर, आफू त्यो महाधिवेशनमा जाने वा नजाने भनेर निर्णयमा पुगिनसकेको र यसबारेमा पार्टीमा छलफल गरेरमात्रै निर्णय गर्ने बताएका हुन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
आज ९सोमबार० पार्टीले चितवनको होटल गंगोत्री हाईवेमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला तथ प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले एमालेको महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गरिनु माओवादी केन्द्रलाई र विशेषगरि आफूलाई सिध्याउनको लागि भएको पनि टिप्पणी गरे । त्यस्तै, उनले एमालेको १०औं महाधिवेशन केही पनि नहुने भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेता मान्ने हिँड्नेबाहेक केहीपनि नहुने जिकिर गरे ।
उनले भनेका छन्,‘एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गर्नुको कारण माओवादी र मलाई सिध्याउन हो, त्यहाँ के को छलफल हुनु ? छलफल हुने पनि होइन, केही पनि होइन केपी ओलीलाई नेता भन्ने हिँड्ने अधिवेशन हो । त्यस्तो नि अधिवेशन हुन्छ त ?